नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
२०७४, २१ भाद्र बुधबार १८:५०
राम्रा/नराम्रा बानी, व्यवहार र विचार सबैका हुन्छन् । ती विचार र व्यवहार हाम्रो आफ्नै बानीबाट हुने गर्दछ । कसैले बानी व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन्, कसैले सक्दैनन् । बानी व्यवहार नकारात्मक बन्दै गए हामी सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले सकेसम्म हामीले आफ्नो नराम्रो बानी र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आजको दिन, आजको काम र आजको व्यवहारलाई नै महत्व दिएर हेर्नुपर्छ । सानालाई माया र ठूलालाई आदर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
क्षमताभन्दा बढी काम गर्नु हुँदैन । क्षमताभन्दा बढी कार्यबोझबाट नै शरीरमा उच्च रक्तचाप, हृदयाघातजस्ता रोग लाग्ने हुन्छ । यसबाट नकारात्मक सोचहरू उत्पन्न हुन्छन् ।
बिहान उठेर नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा सकारात्मक कुराहरू आउँछन् । शरीर स्वच्छ र हल्का हुन्छ ।
चुरोट, सुर्ती र रक्सी पिउने बानी त्याग्नुपर्छ । यस्ता बानीले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक सोचको विकास हुन मद्दत गर्छ ।
किताब पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । नियमित रूपमा किताब पढ्ने बानी भएका व्यक्तिको जीवन बढी व्यवस्थित हुन्छ । आफ्नो कुनै नराम्रा कुराले अरूलाई असर गरेको छ भने त्यस्ता कुरा तत्काल छोड्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
Previous articleयस्ता छन् सस्तो,मिठो र फाईदाजनक फल केराको फाईदा
Next articleघलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको आशालाग्दो प्रगती